Axmed Madoobe oo soo gaaray Muqdisho iyo kulan uu la yeeshay Sheekh Shariif (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Axmed Madoobe oo soo gaaray Muqdisho iyo kulan uu la yeeshay Sheekh Shariif (SAWIRO)
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho, si uu uga qeyb-galo xafladda caleemo saarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo.
Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee Aqalka sare baarlamaanka iyo madaxweynihii hore ee dowladii KMG Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa Axmed Madoobe kusoo dhaweeyay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Axmed Madoobe ayaa gudaha garoonka kulan kooban kula yeeshay Sheekh Shariif Sheekh Axmed, waxayna labada mas’uul ka wada hadleen arrimo u gaar ah iyo doorashadii dhawaan ka dhacday magaalada Muqdisho.
Ugu dambeyntii, Axmed Madoobe ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socdo uu la kulmo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa ka mid ahaa madaxdii maamul goboleedyada dalka aanan ka qeyb-galin ololaha doorashada musharixiinta, taas oo keentay inuu ku kasbado kalsooni badan.